बलियो बेल्जियमलाई नव प्रवेशी पानामाको कडा चुनौती ! || सुनौलो नेपाल
बलियो बेल्जियमलाई नव प्रवेशी पानामाको कडा चुनौती !
स्टार खेलाडीहरूले भरिएको बेल्जियम पनामाविरुद्ध निश्चित जितसहित मैदान उत्रने पक्का छ । इतिहासकै स्वर्णिम टोली बनेको बेल्जियमसँग अहिले टोलीसँग इडेन हजार्ड, रोमेलु लुकाकु, केभिन डि ब्रुयन र थिवाउट कोर्टियसजस्ता प्रतिभाशाली खेलाडीहरूको साथ छ । त्यसैले, बेल्जियम पनामाविरुद्ध हावी हुने पक्का छ ।
‘डार्क हर्स’को उपनाम पाएको बेल्जियमले अन्तर्रा्ष्ट्रिय फुटबलमा चिनिएको त्यति लामो समय भएको छैन । हुन त बेल्जियम १९३० कै विश्वकप खेल्ने टिमहरूमध्येको एक टोली हो । विश्वकपमा विभिन्न आरोह खेपेको बेल्जियम २०१४ को विश्वकपमा आफ्नो छवि परिवर्तन गर्दै बलियो टोलीका रूपमा उदय भएर आयो ।
१२ वर्षपछि ब्राजिल विश्वकपमा फर्किएको बेल्जियमले क्वार्टरफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दै विश्व फुटबलमा बेल्जियम बलियो टोलीका रूपमा उदायो । विश्वकप छनोटमा पनि एक खेल पनि नहारी रसियाको टिकट काट्न सफल भएको बेल्जियम पनामालाई सहजै पन्छाउने रणनीतिमा हुनेछ ।अग्रपंक्तिमा कप्तान इडेन हजार्डसँगै रोमेलु लुकाकु रहँदा पनामालाई टाउको दुखाइ बन्न सक्छ । यस्तै मिडफिल्डमा केभिन डि ब्रुयन हुंदा गोलरक्षक थिवाउट कोर्टियस रहनुले पनि बेल्जियम साँच्चिकै बलियो देखिएको छ ।
यता विश्वकपमा पहिलोपटक सहभागिता जनाएको पनामा बेल्जियमविरुद्ध इतिहास बनाउने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ । विश्वकपमा अनुभव बटुल्ने अवसरका रूपमा लिइएको पनामामा ठूला टिमलाई स्तब्ध बनाउन सक्ने क्षमता छ । पनामामा ठूला क्लबहरूमा नखेलेका खेलाडीहरू नरहे पनि पनामाले बेल्जियमविरुद्ध अंक खोस्ने रणनीतिमा रहनेछ ।
विश्वकप छनोटमा कोस्टारिकामाथि प्राप्त २–१ को जितले कोन्काफ क्षेत्रबाट तेस्रो स्थान हासिल गर्दै पहिलोपटक कुम्भमेलामा स्थान बनाउन सफल भएको हो । नयाँ टोली पनामालाई यो विश्वकप अुनभव बटुल्ने अवसर मात्र हुनेछ । समूहमा पानामालाई ‘अन्डर डग’ बन्न सक्ने टोलीका रूपमा पनि हेरिएको छ । यी दुई टोली कुनै पनि प्रतियोगितामा पहिलोपटक आमने सामने हुन लागेका हुन् ।